प्रेमिकासँग यौनसम्पर्क गर्दा गर्दै युवकको लिङ्ग भाचिएपछि... Kasthamandap Daily
प्रेमिकासँग यौनसम्पर्क गर्दा गर्दै युवकको लिङ्ग भाचिएपछि...
काठमाडौं । प्रेमीसँग यौनसम्पर्क गर्दा गर्दै युवकको लिंग भाँचिएको छ । सहवासलाई एडभेन्चर ठानेर विभिन्न आसनमा जोडतोडका साथ सहवास गर्ने हुँदा एक पुरुषले नराम्रो परिणाम भोग्नुपरेको छ । असजिलो आसनका साथ आफ्नी प्रेमिकासँग सहवास गर्दा ती पुरुषको लिंग नै भाँचियो र उनलाई अस्पताल कुँदाउनुपर्यो ।
घटना भियतनामको हो । डाक्टरहरुका अनुसार ती पुरुषको लिंग फेँदबाटै भाँचिएको छ । यसरी फेँदबाटै यौनांग भाँचिनु निकै दुर्लभ घटना भएको भन्दै हु चि मिन्ह सहरस्थित अस्पतालका डाक्टरहरु पनि अचम्ममा परेका छन् ।
५९ वर्षका ती वयस्कले आफ्नी प्रेमिकासँग निर्वस्त्र भई जोडतोडका साथ सहवास गरिरहेका थिए । चरम आनन्दमा लिप्त भैरहेको बेला उनको यौनांगमा केही टुटेको जस्तो सानो आवाज उनले सुने र त्यसपछि असह्य पीडा हुन थाल्यो ।
उक्त मानिसको पहिचान खुलाइएको छैन । अस्पताल ल्याइसक्दा ती पुरुषको यौनांग निकै सुन्निएको र चम्किलो वैजनी रंगको भैसकेको थियो । फेँदबाटै भाँचिएको उनको यौनांगलाई डाक्टरहरुले बल्लतल्ल शल्यक्रिया गरी जोड्न सफल भएका छन् । एजेन्सीहरुको सहयोग
महिनावारीका हुँदा त्यसको रगत अनुहारमा लगाउने युवती
लण्डन । २७ वर्षकी लौरा टेक्सीरिय हरेक महिना महिनावारीको क्रममा श्राव हुने रगत जम्मा गरेर उनी ...
नर्वेमा समुन्द्र मुनि माछा हेर्दै लन्च र डिनर
एजेन्सी– नर्वेमा युरोपको पहिलो अन्डर वाटर रेस्टुराँ सञ्चालनमा आएको छ । एक सय जना मानिसले ...
मान्छे जस्तै बोल्ने माछा
एजेन्सी । ह्वेल माछाको प्रजाति हो । यो ठूलो माछा हो । तर, ह्वेल माछा मात्र पनि होइन । यो ...
तपाईहरुलाई थाहा छ ? संसारकै धनाढ्य बिल गेट्स जुठा भाँडा माझ्छन् !
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला संसारका धनी व्यक्तिले पनि जुठो भाँडा माझ्छन् भन्ने ? धनाढ्यहरुसँग ...
पाँचवटा पलङ भाचिएपछि अन्तमा भुईमा सुतेर भएपनि यौनसम्पर्कको प्यास मेटाउन बाध्य
काठमाडौं । संसारमा अचम्मका समाचार सुन्न र पढ्न पाइन्छ । बिहे गरेको एक जोडीले पहिलो पल्ट ...
संसारका पोर्न स्टारहरुको कमाई यस्तो छ
काठमाडौं । बैध तथा अवैध तरीकाले पोर्न फिल्म उद्योग संसारभर नै फैलिइरहेको छ । हालै बिजनेश ...
बिकिनी लगाउँदा यी डाक्टरको खोसियो मेडिकल लाइसेन्स
एजेन्सी । म्यान्मारकी एक महिला डाक्टर नांग मी सानको आफूले लगाएको बिकिनीको फोटो शेयर गर्दा ...
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको मेकअपमा मासिक ८० लाख भारु खर्च !
नयाँदिल्ली । अहिले भारतीय पधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मेकअप गरिरहेको एक भिडियोले भारतमा ...
श्रीमानको मृत्युमा श्रीमतीको अश्लील डान्स
एजेन्सी । चीनमा एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ मृतकको अन्त्येष्टिको बेला उसका परिवारहरु नाचगान ...